နယ်သာလန်ရှိနိုင်ငံတကာအယူခံရှေ့နေများ - Law & More
တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံးသည်သူတို့၏အမှု၌စီရင်ချက်ကိုသဘောမတူကြောင်းတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ တရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်သင်သဘောမတူပါသလား။ ထို့နောက်ဤစီရင်ချက်ကိုအယူခံတရားရုံးသို့အယူခံဝင်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ သို့သော်ဤရွေးချယ်မှုသည်ယူရို ၁,၇၅၀ ထက်နည်းသောဘဏ္interestာရေးအကျိုးစီးပွားရှိသောပြည်သူ့ရေးရာကိစ္စများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ တရားရုံး၏စီရင်ချက်ကိုသင်သဘောတူပါသလား။ ထိုအခါသင်သည်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုမှုတွင်ပါဝငျနိုငျသညျ။ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်အယူခံဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဆက္သြယ္ရန္ LAW & MORE!
အယူခံဝင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းခေါင်းစဉ် ၇ တွင်ပြဌာန်းထားသည်။ ဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုအမှုနှစ်ခုအားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနိယာမပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ပထမဥပမာမှာများသောအားဖြင့်တရားရုံးတွင်၊ အယူခံတရားရုံးတွင်ဖြစ်သည်။ အမှုနှစ်ခုကိုကိုင်တွယ်ခြင်းသည်တရားမျှတမှု၏အရည်အသွေးနှင့်နိုင်ငံသားများ၏တရားမျှတမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်ယုံကြည်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ အသနားခံစာတွင်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းနှစ်ရပ်ရှိသည်။
• ထိန်းချုပ်မှု function ကို။ အယူခံဝင်သည့်အခါ၊ သင့်အမှုကိုအပြီးအပိုင်ပြန်လည်စစ်ဆေးရန်တရားရုံးအားတောင်းဆိုပါ။ ထို့ကြောင့်တရားရုံးမှပထမအကြိမ်တရားသူကြီးသည်အချက်အလက်များကိုမှန်ကန်စွာအတည်ပြုခြင်းရှိ၊ မရှိဥပဒေကိုမှန်ကန်စွာကျင့်သုံးခြင်းရှိ၊ မရရှိလျှင်၊ ပထမတရားသူကြီး၏စီရင်ချက်ကိုတရားရုံးမှပယ်ဖျက်လိမ့်မည်။
• ခွင့်ပြုပါ။ သင့်အနေဖြင့်ပထမအကြိမ်တွင်မှားယွင်းသောတရား ၀ င်အခြေခံကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏ဖော်ပြချက်အားလုံလောက်စွာမဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ဖော်ပြချက်အတွက်သက်သေအထောက်အထားများအနည်းငယ်မျှတင်ပြခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ အပြည့်အဝ resit ၏နိယာမထို့ကြောင့်အယူခံတရားရုံးအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်အားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်တရားရုံးသို့ထပ်မံတင်ပြနိုင်ရုံတင်မကဘဲ၊ သင်ကအယူခံဝင်ပါတီတစ်ခုအနေဖြင့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးအမှု၌သင်ပြုသောအမှားများကိုလည်းပြင်ရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည် သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အယူခံဝင်ခြင်းတွင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်တရားရုံးတွင်အယူခံ ၀ င်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုရွေးချယ်ပါကသတ်မှတ်ထားသောကာလတစ်ခုအတွင်းအယူခံဝင်ရမည်။ ထိုကာလ၏အရှည်သည်အမှုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ စီရင်တော်မူခြင်းကစီရင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်လျှင် အရပ်ဘက်တရားရုံးသင်သည်အယူခံဝင်ရန်စီရင်ချက်ချသည့် နေ့မှစ၍ သုံးလရှိသည်။ သငျသညျပထမ ဦး ဆုံးဥပမာမှာအကျဉ်းချုပ်တရားစွဲဆိုမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ခဲ့သလား ထိုအမှုတွင်တရားရုံးသို့အယူခံဝင်ရန်ရက်သတ္တ ၄ ပတ်သာကြာသည်။ လုပ်ခဲ့တယ် ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး မင်းရဲ့အမှုကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်၊ ထိုအမှု၌သင်သည်တရားရုံးသို့အယူခံဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနှစ်ပတ်အကြာတွင်ရှိသည်။
အယူခံဝင်ခြင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည်တရား ၀ င်သေချာမှုရှိစေသောကြောင့်ဤနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်များကိုလည်းတိကျစွာလိုက်နာရမည်။ အယူခံဝင်ခြင်းသက်တမ်းသည်တင်းကျပ်သောနောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သည်။ ဤကာလအတွင်းအယူခံ ၀ င်ခြင်းရှိပါသလား။ ထိုအခါသင်သည်နောက်ကျဖြစ်ကြပြီးထို့ကြောင့်ခွင့်မပြုပါ။ အယူခံဝင်ရန်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးပြီးနောက်အယူခံ ၀ င်မှုကိုအထူးအခြေအနေများတွင်သာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အယူခံ ၀ င်မှုနောက်ကျခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာတရားသူကြီးကိုယ်တိုင်၏အမှားကြောင့်ဖြစ်လျှင်အမှုအားပါတီများသို့ပေးပို့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အယူခံ ၀ င်မှုအခြေအနေတွင်အခြေခံနိယာမမှာပထမအကြိမ်နှင့်ပတ်သတ်သောပြဌာန်းချက်များသည်အယူခံ ၀ င်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ အယူခံဝင်ထို့ကြောင့်တစ် ဦး နှင့်အတူစတင်ဖြစ်ပါတယ် ဆင့်ခေါ်စာ တူညီသောပုံစံနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးဥပမာအားဖြင့်တကဲ့သို့တူညီသောလိုအပ်ချက်များကိုအတူ။ သို့သော်အယူခံဝင်ရန်အကြောင်းပြချက်ကိုဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤအကြောင်းပြချက်များကိုတိုင်ကြားချက်များတွင်သာတင်ပြရမည် အဆိုပါဆင့်ခေါ်စာနောက်တော်သို့လိုက်သည်.
အယူခံဝင်ရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များမှာတရားရုံး၏အယူခံ ၀ င်သောစီရင်ချက်အားပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်းအယူခံ ၀ င်ရန်တင်သွင်းရမည့်အချက်များဖြစ်သည်။ ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိသောစီရင်ချက်၏အစိတ်အပိုင်းများသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီးအယူခံ ၀ င်မှုအပေါ်တွင် ထပ်မံ၍ ဆွေးနွေးရန်မရှိတော့ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်အယူခံ ၀ င်ခြင်းနှင့်တရားရေးဆိုင်ရာအချက်အချာကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပထမအကြိမ်တွင်စီရင်ချက်ချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကိုကန့်ကွက်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဤအခြေအနေတွင်အငြင်းပွားမှုအားအပြည့်အ ၀ အတိုင်းအတာအထိရောက်စေရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုသည်အောင်မြင်။ မအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းနှင့်ဤအခြေအနေတွင်သိရန်အရေးကြီးသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်အယူခံဝင်ခြင်းတွင်တိကျသောကန့်ကွက်မှုတစ်ခုရှိရမည်။ သို့မှသာကာကွယ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကန့်ကွက်မှုအတိအကျကိုအခြားပါတီမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တိုင်ကြားချက်များ၏ဖော်ပြချက်အောက်ပါအတိုင်း ကာကွယ်ရေး၏ကြေညာချက်။ အယူခံဝင်ခြင်းဖြင့်တရားခံသည်အယူခံ ၀ င်သည့်စီရင်ချက်အားခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များတင်ပြ။ အယူခံ ၀ င်သူ၏တိုင်ကြားချက်များကိုတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ တိုင်ကြားချက်များနှင့်ကာကွယ်ရေးကြေငြာချက်သည်အယူခံဝင်ရာနေရာများလဲလှယ်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်သည်။ စာဖြင့်ရေးသားထားသောစာရွက်စာတမ်းများကိုဖလှယ်ပြီးနောက်တွင်မူမူအားဖြင့်တောင်းဆိုမှုများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်မြေနေရာအသစ်များထပ်မံတင်ပြရန်ခွင့်မပြုတော့ပါ။ ထို့ကြောင့်အယူခံ ၀ င်မှုသို့မဟုတ်ကာကွယ်ရေးကြေငြာချက်အပြီးပေါ်ထွက်လာသည့်အယူခံ ၀ င်ခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်များကိုတရားသူကြီးကအာရုံမစိုက်နိုင်တော့ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ အလားတူပြောဆိုချက်ကို၏တိုးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်ခြွင်းချက်အားဖြင့်အခြားအဖွဲ့ကခွင့်ပြုချက်ပေးလျှင်၊ တိုင်ကြားချက်သည်အငြင်းပွားမှု၏သဘောသဘာဝသို့မဟုတ်ပေါ်လစီစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြပြီးနောက်အခြေအနေအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါကနောက်ပိုင်းအဆင့်တွင်မြေကိုလက်ခံနိုင်သေးသည်။
ပထမအချက်အနေဖြင့်ပထမအကြိမ်ရေးသားထားသောပတ်ပတ်လည်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာသည် တရားရုံးရှေ့မှောက်၌ကြားနာ။ အယူခံတွင်ဤနိယာမမှချွင်းချက်ရှိပါသည်။ တရားရုံးမတိုင်မီအမှုကြားနာခြင်းကိုအခွင့်အလမ်းမရှိသောကြောင့်သာမန်မဟုတ်ပါ။ အများအားဖြင့်အမှုကိစ္စများကိုတရားရုံးမှစာဖြင့်ရေးသားလေ့ရှိသည်။ သို့သော်နှစ်ဖက်စလုံးကသူတို့၏အမှုကိုကြားနာရန်အတွက်တရားရုံးကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ အကယ်၍ ပါတီတစ်ခုသည်အယူခံတရားရုံးရှေ့မှောက်တွင်ကြားနာလိုပါကအထူးအခြေအနေများမရှိပါကတရားရုံးမှခွင့်ပြုရမည်။ ဤအတိုင်းအတာအထိအယူခံ ၀ င်ခွင့်ဆိုင်ရာအမှုကိစ္စသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
အယူခံဝင်အတွက်တရားစွဲဆိုမှုအတွက်နောက်ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် စီရင်ခြင်း။ ဤစီရင်ချက်တွင်အယူခံတရားရုံးသည်အစောပိုင်းတရားရုံး၏စီရင်ချက်မှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ လက်တွေ့တွင်အယူခံတရားရုံး၏နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ကိုပါတီများအနေဖြင့် ၆ လနှင့်အထက်ကြာနိုင်သည်။ အယူခံဝင်သူ၏ခိုင်ခိုင်လုံလုံကိုထောက်ခံပါကတရားရုံးသည်အငြင်းပွားဖွယ်စီရင်ချက်ကိုဘေးဖယ်ထားပြီးအမှုအားကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အယူခံတရားရုံးကအငြင်းပွားဖွယ်စီရင်ချက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထောက်ခံလိမ့်မည်။
အုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသင်သဘောမတူဘူးလား။ ထို့နောက်သင်အယူခံဝင်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်သင်ဆက်ဆံသောအခါ၊ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်အခြားအသုံးအနှုန်းများနှင့် ဦး စွာကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးတရားသူကြီး၏စီရင်ချက်ကိုကြေငြာသည့်အချိန်ကာလမှခြောက်ပတ်ကြာလေ့ရှိပြီးအယူခံတင်နိုင်သည်။ အယူခံ ၀ င်မှု၏အခြေအနေတွင်သင်လှည့်နိုင်သောအခြားဖြစ်ရပ်များကိုလည်းသင်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ မည်သည့်တရားရုံးသို့သင်သွားရမည်အမှုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။
• လူမှုဖူလုံရေးနှင့်အစိုးရဝန်ထမ်းများဥပဒေ။ လူမှုဖူလုံရေးနှင့်အစိုးရ ၀ န်ထမ်းဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စများကိုဗဟိုအယူခံဘုတ်အဖွဲ့ (CRvB) ကအယူခံဝင်သည်။
• စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှု။ အခြားသူများအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုအက်ဥပဒေ၊ စာတိုက်အက်ဥပဒေ၊ ကုန်စည်အက်ဥပဒေနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအက်ဥပဒေတို့၏ဆက်စပ်မှုများကိုစီးပွားရေးအယူခံဘုတ်အဖွဲ့ (CBb) ကအယူခံဝင်သည်။
• လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များ။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအမှုများအပါအ ၀ င်အခြားအမှုများကိုနိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဌာန (ABRvS) ကအယူခံဝင်သည်။
များသောအားဖြင့်ပါတီများသည်အယူခံတရားရုံး၏စီရင်ချက်ကိုလိုက်နာကြပြီးသူတို့၏အမှုအားအယူခံဝင်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းကြသည်။ သို့သော်အယူခံဝင်သည့်တရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်သင်သဘောမတူသလား။ အယူခံတရားရုံး၏စီရင်ချက်ကိုသုံးလအကြာတွင်နယ်သာလန်တရားရုံးချုပ်သို့အယူခံဝင်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည် ABRvS၊ CRvB နှင့် CBb တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ပြီးနောက်၊ ထိုအဖွဲ့များ၏ထုတ်ပြန်ချက်များတွင်အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤစီရင်ချက်များကိုစိန်ခေါ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အယူခံဝင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါကအငြင်းပွားမှုကိုအမှန်တကယ်အကဲဖြတ်ရန်နေရာမရှိကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ အယူခံဝင်ရန်အကြောင်းပြချက်များမှာအလွန်နည်းပါးသည်။ အောက်ဖော်ပြပါတရားရုံးများသည်ဥပဒေကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချခြင်းမရှိသောကြောင့်သာလျှင်အဂတိလိုက်စားမှုကိုစတင်မိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်နှစ်နှင့်ချီ။ ကုန်ကျသောစရိတ်များပါသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အယူခံ ၀ င်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှထွက်ခွာရန်အရေးကြီးသည်။ Law & More ဒီအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပျော်ရွှင်သည်။ အပြီးအယူခံ ၀ င်ခြင်းသည်မည်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်မဆိုရှုပ်ထွေးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Law & More ရှေ့နေများသည်ရာဇ ၀ တ်မှု၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အရပ်ဘက်ဥပဒေနှစ်ခုလုံးတွင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ပြီးအယူခံဝင်ခြင်းများအတွက်သင့်အားကူညီပေးလိုသည်။ အခြားမေးခွန်းများရှိပါသလား။ ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပါ Law & More.